कांग्रेस अधिवेशन : तनहुँमा मन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्म चुनावी मैदानमा - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०७८, सोमबार १ : १७
तनहुँ । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन तनहुँमा आज हुँदैछ । तनहुँमा दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र छ । क्षेत्र नम्बर १ को सदरमुकाम दमौलीमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्न मतदान सुरू भइसकेको छ । यहाँ नौ सय ५४ मतदाताले पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयनमा मतदान गर्ने छन् ।
तनहुँमा कांग्रेसको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा रोचक भिडन्त त महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमा हुँदैछ । यो पदमा मन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मका वहालवाला जनप्रतिनिधिको दबदबा छ । संविधानसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने होडमा देखिन्छन् । तसर्थ, पनि पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमै कस्ले बाजी मार्ला ? कसले पराजय भोग्नु पर्ला ? भन्ने विषयलाई खुब चासोको साथ हेरिएको छ ।
खस आर्यबाट जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, भानु नगरपालिका(१३ का वडाध्यक्ष रामबहादुर बानियाँ, आदिवासी जनजातिमा व्यास नगरपालिका(१३ का वडाध्यक्ष लेखबहादुर राना, अल्पसंख्यकमा व्यास नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष खरसिंह दरै महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमा निर्वाचन लड्दैछन् । खुला महिलातर्फ आँबुखैरेनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुष्पादेवी श्रेष्ठको उम्मेदवारी परेको छ । संविधानसभा सदस्य रामचन्द्र पोखरेल, व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने खुल्लातर्फबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवार हुन् ।
क्षेत्र नम्बर २ मा संविधानसभा सदस्य ध्रुव वाग्ले, झुलबहादुर आले, ऋषिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ खुल्लातर्फ महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेदवार बनेका छन् । म्याग्दे गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मायादेवी राना खुला महिलातर्फ, व्यास नगरपालिका(५ का वडाध्यक्ष मोहनकुमार श्रेष्ठ जनजाति पुरुषतर्फ, ऋषिङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गिनुमाया थापा जनजाति महिलातर्फ, म्याग्दे गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य रामकृष्ण विक दलित पुरुषतर्फ, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य दिव्यश्वरी विक दलित महिलातर्फ र घिरिङ गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष गंगाबहादुर कुमाल अल्पसंख्यकतर्फ महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमा उम्मेवारी दिएका छन् ।